QM oo sheegtay in ay si qoto dheer u baarayaan sababihii loo eryay Nicholas Haysom… – Hagaag.com
QM oo sheegtay in ay si qoto dheer u baarayaan sababihii loo eryay Nicholas Haysom…
Farhan Haq oo ah ku-xigeenka afhayeenka Qaramada Midoobey ayaa sheegay in ay si qota dheer ay u baarayaan sababihii keenay in dowladda Soomaaliya shaqada ka joojiso wakiilkii xoghayaha guud ee QM Nicholas Haysom.
“Waan aragnay arrinkaan, waxaan isku dayaynaa in aan helno faahfaahin kala duwan iyo Cadeymo waxaana arki doonnaa iyada oo lagu saleynayo wixii tallaabooyin dheeraad ah loo baahan yahay, waana ka fiirsan doonaa” Haq ayaa u sheegay warbaahinta.
Wuxuu sheegay in warka arintan ku saabsan uu soo gaaray xafiiska xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Antonio Guterres oo dhinaca kale siweyn u cambaareeyay weerarkii hoobiyaha loo adeegsaday ee lagu qaaday xafiiska UNka ee Muqdisho.
Tallabada dowladda Soomaaliya ay dalka uga eriday wakiilka QM ayaa ku soo beegatay xili siddoo kale shaqaale ka tirsanaa xafiiska Qaramada Midoobey ee Soomaaliya lagu dhaawacay weerar madaafiic ah oo lagu qaaday xaruntooda Soomaaliya ee ku taala xerada Xalane.
Lama oga go’aanka xafiiska xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey uu ka qaadan doonno go’aanka ay dowladda Soomaaliya shaqada uga joojisay wakiilkoodii Soomaaliya.